Waa side xiriirka dowladda cusub ee Madaxwayne Farmaajo iyo dowladaha Yugaandha iyo Itoobiya? | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Waa side xiriirka dowladda cusub ee Madaxwayne Farmaajo iyo dowladaha...
Waa side xiriirka dowladda cusub ee Madaxwayne Farmaajo iyo dowladaha Yugaandha iyo Itoobiya?
Kulan ayaa dhexmaray Madaxda Dawladaha itoobiya iyo ugaandha kulankaa oo ahaa kacdoon siyaasadeed oo laga soo hor jeedo Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.kulankan ayaa ka dhacay magaalada Kampala ee wadanka ugandha.
Sida la wada og yahay Dawlada Kenya ayaa la waydiiday inay ka soo qeyb gasho kulankan.
Dad badan mafahansana siyaasadda dawladaha Geeska Africa qaarkood danaha ay ka leeyihiin inay tahay in Soomaaliya dawlad la’aan ahaato waqti dheer.
Waxa jira, tuhun ay dalalka deriska Qaarkood ay ka qabaan nooca uu noqon doono xiriirka cusub ee dowladda Farmaajo kala dhaxeyn doona.
Maxay tahay danta u qarsoon.
Wadama ku bahoobay ciidamada Wata koofiyadda [AMISOM]ayaa waxay Bulshada caalamka ka soo uruuriyaan kharashka ku baxa ciidamada Afrikaan-ka ah ee ilaaliya dowladda faderaalka Soomaaliya iyo amniga guud.
Halkii askari ee AMISOM ah ayaa qaata xaquuq dhan 990 Euros oo u dhiganta 1,028 doolar bishiiba.
Wadammada ciidanka soo diraya ayaa iyagu xaq u leh in ay askartooda u qiimeeyaan mushaharka ama lacagta uu qaadanayo askartooda.
Arinkaa ayaa waxaa la sheegay inuu diidan yahay madaxweyne Farmaajo oo wuxuu doonayaaa in soomaaliya ciidan xoogan ay yeelato waqtiga dhow.
Waxaa si gaar ah colaad ugu qaaday wadanka ugaadha Gaar ahaan Masaxweyne Musavenioo xukumadiisa dhaqaalo badan ka soo galo mashruuca ciidamada AMISOM ee soomaaliya.
Madoonayaan inaan dhisano ciidankeena xooga dalka, si aan u siino xuquuqdooda. Qodobkan waa kan ugu wayn ee ay diidan yihiin wadamada itoobiya iyo ugaandha inaaney soomaaliya yeelato ciidan u gaar ah.
Maxaa la gudboon oo Talo wanaagsan u ah Madaxweyne Farmaajo?
Waa dhawr arimood in uu si dhaqso ah u hirgaliyo si uu uga badbaado shir-qoolka dowladdiisa loo maleegayo.
1= Marka ugu horaysa waa inuu Taageero wayn ka helaa Madaxda Maamul Gobaleed-yada oo kala ah Maamulka Koonfur Galbeed iyo Maamulka Puntland. labadaan maamul waxaa dhici karta inay Dawladda itoobiya si qaldan wax dhagta ugu sheegto.
2= Arinka kale waa in Madaxweyne Farmaajo uu si dhaqsa ah uu itoobiya uu ugu sharaxo xiriirka iyo wada shaqeynta dhex mari karta labada dal oo deris ah, gaar ahaana kawa Tirsan urur gobaleedka IGAD iyo AU Midowga Africa haddana dhul iyo dadna ka dhexeeyo.
waana inuu ka dhaadhiciyaa in Nabad galyadu cidwalba inay dani ugu jirto.
Waa inuu In uu si dhaqso ah u tagaa wadanka ugaandha.
Sidaan wada og nahay wadanka ugaandha waxay ciidama badan oo wata koofida AMSOM waxay ka joogaan meela muhiima oo muqdisho ku yaal.
Ciidamadaa waxaa loo istic maali karaa inay dhibaateeyaan abniga Madaxweyne Farmaajo
waa in uu arinkaa kala hadlaa madaxweyne musevani oo ka dhaadhiciyaa in la siiwado habkii hore ee labada wadan u wadan shaqyn jireen wixii khilaafna meesha laga saara.
sida aan wada og nahay maalintii caleemasaarka madaxweyne Farmaajo
Madaxweyne musaveni kamuu soo qeyb galin arinkaa wuxuu abuuray shaki baden. way iska cadahay in siyaasada Madaxweyne musaveni aanu ku qanac saneny Guusha uu gaaray Madaxweyne Farmaajo.
Falanqey taydu waxay Tilmaamaysaa maxaa keenay inay madaxda itoobiya iyo ugaandho sameystaan dhaq dhaqaaq siyaasadeed oo looga hor imanayo hogaanka madaxweyne Farmaajo. Arinkaa wuxuu u yaal inay wax ka qabtaan Madaxda soomaaliyeed Gaar ahaan madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
Waqtiga la joogo waxaan ka sugaynaa madaxda soomaaliyeed inay la yimaadaan siyaasad Fur fur oo keeni karta in cadaw geenu iyareeyo colaad deg deg ah oo keeni karta in Dawladeeno la fashiliyo iyadoo la iska horkeenayo shacabka soomaaliyeed dhexdooda. Sidii hore u dhici jirtay.
Waqtigan hada la joogo shacabka soomaaliyeed waxay u baahan yihiin inay marka hore dhistaan . Qadiyad soomaalinimo ku dhisan Marka arinkaa lagaaro in ay jirto Qadiyad somalinimo ku dhisan cidkasta waan iska celin karnaa.
Falanqayntan waa fikirka qoraaga. kama turjumayso siyaasadda Xaqiiqa Times
Falanqeyntan waxaa Qoray Maxamed Caalim oo ah Aqoonyahayan wax ka Falanqeeya xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya Degan wadanka Finland.
Previous articleSawiro: Ra’iisul Wasaaraha oo xilka la wareegay
Next articleShuban biyood 69 qof ku dilay gobalka Baay